Ndị na-emepụta paaki - China Factory, na - eweta - Nkebi 2
Akpa azumahia T-B3983
Akpa Crossbody T-L5191
Akpa Crossboy T-S8113
Akpa uwe T-L5188
Uwe eji eji ejiji ejiji TIGERNU maka umuaka
Ike: Akpa akpa bụ ụdị ejiji nke 29 * 14 * 45cm (L * W * H). mkpa gị kwa ụbọchị, akwụkwọ, uwe, ụlọ akụ ike, ekweisi na ihe ndị ọzọ. The n'ihu ogige na otutu divider akpa na-enyere aka ịhazi gị obere nwere, itienna, obere akpa, ekwentị, Gịnị wdg Otu akụkụ mkpọchi uwe n'akpa uwe na otu akụkụ ntupu n'akpa uwe; azụ mgbochi ohi n'akpa uwe maka ihe ndị dị mkpa.
Safety atụmatụ: The ejiji azu paaki ka nke splashproof & ọkọ na-eguzogide ọgwụ naịlọn, inogide na ogologo na-adịgide adịgide. Ugboro abụọ nke anọ na-eme ka mkpọchi mkpọchi mechiri emechi na-enye nchekwa maka njem gị na ndụ kwa ụbọchị.
Atụmatụ: Azụmaahịa azụmaahịa nwere eriri ubu nwere agbaji agbaji na padded azụ nwere padded nke na-akwalite ikuku ikuku maka nkasi obi mgbe ị na-agagharị.
Akpa a bụ akpa ejiji ụlọ akwụkwọ ejiji, dabara adaba maka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị, ụmụ akwụkwọ maka ebumnuche ọ bụla. AKWNKWỌ AKWNKWỌ TIGERNU dị mma maka ụlọ akwụkwọ, mahadum, ngwụsị izu, njem oge ụfọdụ, mgbatị ahụ, ọrụ kwa ụbọchị, azụmahịa, njem, ịma ụlọikwuu na njem.
UMUAKA ulo akwukwo ejiji TIGERNU
Ikike: Thedị ụlọ akpa ejiji bụ 28 * 13 * 39cm (L * W * H). Isi ogige ahụ na akpa laptọọpụ padded na-ejide laptọọpụ 14 '.Ọ sara mbara na ọtụtụ akpa ego maka akwụkwọ gị, ụlọ akụ ike, Isi okwu, obere akpa na ihe ndi ozo.Ọ na - enyere aka idobe ihe gị nke ọma. The n'ihu mkpọchi uwe n'akpa uwe maka gị mfe nnweta stuffs.You nwere ike na-gị ihe bara uru na azụ mgbochi na-ezu ohi pocket.It bụkwa ìhè arọ, naanị dịrị 0.8kg.
Ihe: Ọ na-mere nke splashproof & mgbochi fouling oxford, nke bụ nnọọ inogide na eco-enyi na enyi. Ọ na-echebe ihe gị pụọ na obere mmiri ozuzo na akpaazụ nwere ike ihichapụ ma kpochaa ngwa ngwa.
Atụmatụ: A na-echekwa mkpọchi ahụ, nye nchebe ọzọ maka ihe onwunwe gị. Ubu ubu a na-edozi ma tinye ya na ntupu nke na-enyere aka belata nrụgide nke akpa azu zuru ezu.
Agba pink dị mma maka ụmụ agbọghọ abụọ dịka akpa ụlọ akwụkwọ ejiji.
TIGERNU mbụ imewe mara mma amụrụ azu paaki maka ụmụaka
Akpa a dị ezigbo mma ma dabara adaba maka ụmụaka.
• ọkụ dị mfe, nhọrọ dị mma maka ụmụaka
• ihe nchekwa, eco-friendly na elu mma, nfụkasị free na-adịghị njọ
• agbatị ma gbasaa eriri ubu, ergonomic design enyere aka belata ibu na ahịhịa
• azụ panel ọma padded na ogbo na ntupu nwere ike dịkwuo ikuku eruba
• ọtụtụ akpa na ngalaba na-enyere aka ịchekwa ụlọ ọrụ nke ọma na ịdị mfe ịchọta
• mgbanwe ubu eriri
• ntụgharị uche na eriri na akpa n'akụkụ, na-eme ka ụmụaka bụrụ ndị a na-ahụkarị n'oge abalị
• agba abụọ dị, acha anụnụ anụnụ na pink, nhọrọ dị mma maka ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ
• niile loading akụkụ na-mesikwuru, ọzọ sturdy na inogide
Ezi nhọrọ maka ụmụaka dị ka akpa akwụkwọ.
TIGERNU ejiji imewe otutu nzube azu paaki
Enwere otutu nchekwa na akpa ego tinyere otu pọọsụ 14 pocket laptọọpụ. Zuru oke maka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ kwa ụbọchị na azụmaahịa, ụlọ akwụkwọ, kọleji na njem.
Ihe dị mma: A na-eji paịlị a na-agba paịlị na ọkọ mmiri na-eguzogide ọgwụ siri ike, nke siri ike, na gburugburu ebe obibi. Zippers na buckles dị mma na akara TIGERNU.
Ebughibu Design & Super Ọhazi: Ebughibu ele ihe anya kwekọrịtara azụmahịa-ukporo ojiji perfect.The ejiji azu paaki size bụ 25 * 18 * 36cm (L * W * H). Azu paaki nwere ọtụtụ akpa na ihu na azụ, na-enyere gị aka tufuo na-egwu ala gburugburu akpa. A ga-ahazi ngwa ọ bụla. Laptọọpụ laptọọpụ: jidere laptọọpụ 14inch.
Nhọrọ Dị Mma: Ezigbo onyinye maka ụmụ akwụkwọ kọleji maka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị, ndị na-eto eto, ndị okenye.
Akpa akpa T-B3176Nylon
TIGERNU ebughibu imewe azu paaki maka ụmụ akwụkwọ kọleji
Ikike: Nke a na-amụrụ azu paaki size bụ 30 * 18 * 47cm na a iche iche laptọọpụ ogige dabara ruo 15,6 ″ laptọọpụ. Ogwe laptọọpụ dị n'okpuru eriri ubu, na-enyekwu gị nchekwa. Otu isi nnukwu ogige nwere ọtụtụ oghere na-enye ohere zuru ezu maka mkpa gị kwa ụbọchị dịka uwe, akwụkwọ, obere akpa, mbadamba na ihe ndị ọzọ. .
Usoro nkwado dị mma: Ergonomic design of S-shape padded shoulder straps mere site na akwa na-eku ume na ume na akwa na-enye gị ahụmịhe dị mma. Ogwe ubu a na-agbanwe agbanwe na-eme ka akpa a dabara adaba mmadụ ọ bụla.
Ihe mara mma: A na-eji paịlị USB na-eme ihe ntanetị na ncha na-eguzogide ọgwụ, nke na-adịgide adịgide na enyi na enyi. The waterproof ụzọ abụọ emeghe mkpọchi mkpọchi nke isi ogige na-enye mgbochi-ezu ohi nchebe maka njem gị.
Azụ ahịa laptọọpụ azụmaahịa a bụ nhọrọ zuru oke maka ebumnuche ọ bụla, azụmaahịa, njem, ụlọ akwụkwọ, ịzụ ahịa, ndụ kwa ụbọchị, ịma ụlọikwuu, picnic. Nabata ịzụ ahịa na TIGERNU.
TIGERNU ejiji imewe azu paaki
Ikike: Nke a na-amụrụ azu paaki nwere abụọ nha, osobo mkpa dị iche iche. 47cm (L * W * H), na ngalaba laptọọpụ dị iche dabara na laptọọpụ 15.6 ″. Ogwe laptọọpụ dị n'okpuru eriri ubu, na-enyekwu gị nchekwa. Otu akụkụ buru ibu nke nwere ọtụtụ oghere na-enye ohere zuru ezu maka mkpa gị kwa ụbọchị dịka uwe, akwụkwọ, obere akpa, mbadamba na ihe ndị ọzọ.
Ihe mara mma: A na-eji paịlị USB ejiri paịlị na ọkọlọtọ na-eguzogide ọgwụ oxford, nke na-adịgide adịgide ma nwee mmekọrịta enyi na enyi. Uwe mkpuchi okpukpu abụọ nke mmiri na-emeghe mkpọchi mkpọchi nke oghere dị na ya na-enye nchebe mgbochi ohi abụọ maka njem gị.
Tigernu ejiji imewe otutu azu paaki
Akpa akpa ikike: Ọtụtụ ngalaba nchekwa na-ejide laptọọpụ ruo elekere 15.6. Nnukwu ngalaba dị mkpa nke akpa a, dabara maka akwụkwọ, A4 nchekwa, uwe na ihe ndị ọzọ dị mkpa kwa ụbọchị. maka obere ihe gị ma debe ha nke ọma.
Nkịtị dị mma: Usoro nkwado nkwado ergonomic emebere eriri ubu na azụ. Onwem nwere na kemeghi obi ikechi na mgbanwe mgbanaka hasp, -enyere gị aka ịchịkwa eriri ogologo kpamkpam na-ebelata ibu arọ.
Inogide na Anti Izu: A azu paaki ka nke splashproof & ọkọ na-eguzogide ọgwụ naịlọn, inogide, ogologo na-adịgide adịgide na eco-enyi na enyi. Ihe a dị mma ihe na-eguzogide mmiri na-eguzogide ọgwụ Oxford maka mmiri ozuzo a na-atụghị anya ya, hichaa ya na nkeji 5, enweghị akara aka ekpe. Mkpọchi mgbapu 4 nha nha eze nke isi ogige enye ibu njem nchekwa gị.
Atụmatụ: Site na oghere ntị ntị, akpa a na-enye gị ohere ịnụ ụtọ egwu oge ọ bụla ebe ọ bụla na-enweghị wepụta ngwaọrụ. Ogwe laptọọpụ zoro ezo n'okpuru eriri ubu bụ mkpọchi. ndị a Kwadobe.
Nhọrọ dị mma: akpa akwa Tigernu maka ụlọ akwụkwọ, mahadum, ngwụsị izu, njem oge ụfọdụ, mgbatị ahụ, ọrụ kwa ụbọchị, azụmahịa, njem, ịma ụlọikwuu na njem.
TIGERNU ejiji ejiji akwa azumazu azumahia
Ezubere akpa laptọọpụ a maka ọtụtụ ebumnuche. Ebumnuche square square na-ekwekọrịrị azụmaahịa azụmaahịa-zuru oke. Kwuo maka igwu ala na akpa, a ga-ahazi ngwaọrụ ọ bụla .Ọ nwere otu obere laptọọpụ dị iche na nnukwu ngalaba nwere ọtụtụ arụ ọrụ na iPad bin, otu akpa n'ihu na akpa akpa abụọ, azụ azụ zoro ezo nchekwa, na-enye ohere sara mbara maka mkpa gị kwa ụbọchị ma debe ihe gị nke ọma.
Ihe dị mma: Akpa akpa ahụ na-eji akwa dị mma ejiri ya rụọ ọrụ nke ọma, gosipụtara ya naịlọn na-agba mmiri na-eguzogide ọgwụ, mgbochi mgbochi, akwa na-eguzogide ọgwụ na gburugburu ebe obibi. akaebe na-eji ire ụtọ iji.
Humanized imewe: Ergonomic imewe padded ubu straps na padding azụ imewe, mere si akwa na-agbanwe na breathable ogbo na akwa, onwem na kemeghi obi ikechi na mgbanaka ụdị kemeghi hasp, ịgbanwe eriri ogologo kpamkpam, belata ibu nke ibu, chebe azụ na ubu nke oma, nkasi obi karie ndu gi.
Nchedo: Akpa a laptọọpụ nwere obere laptọọpụ zoro ezo na azụ azu paaki na-enye ohere dị mfe na laptọọpụ ozugbo na-egosighị ihe nkeonwe gị n'ihu ọha; Enwere ike imechi mkpọchi uwe ka D ọdịdị mgbanaka iji debe nzuzo laptọọpụ.
AKWNKWỌ AKWNKWỌ TIGERNU dị mma maka ụlọ akwụkwọ, mahadum, ngwụsị izu, njem oge ụfọdụ, mgbatị ahụ, ọrụ kwa ụbọchị, azụmahịa, njem, ịma ụlọikwuu na njem.
TIGERNU multi-nzube laptọọpụ azu paaki
Ọ bụ akpa eji ejiji laptọọpụ emere, nke zuru oke maka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ kwa ụbọchị iji azụmaahịa, ụlọ akwụkwọ, kọleji na njem.
Ihe: A na-eji paịlị azụ azụ azụ na ncha na-eguzogide ọgwụ, akwa dị elu, na-adịgide adịgide, eco-friendly. Ihe mgbochi mgbapu 4 ezé zipa nke isi ogige ahụ na-enye mgbochi mgbochi ohi abụọ na mkpọchi mkpọchi mkpọchi na-enye gị nchekwa nchekwa njem.
Ala Nkwado Sistem: Ergonomic-e mere padded ubu straps na azụ, mere si elu-elasticity na breathable ogbo na akwa. Onwem nwere na kemeghi obi ikechi na mgbanwe mgbanaka hasp, -enyere gị aka ịchịkwa eriri ogologo kpamkpam na-ebelata ibu arọ. Akpa anyị na-enye nkwado na nkasi obi azụ na ubu gị.
Ebughibu Design & Super Ọhazi: The azu paaki size bụ 33 * 20 * 49cm (L * W * H), dabara maka laptọọpụ ruo 17 ″. Obere uzo a na acho imechi emecha emezi. Otu uzo buru ibu nwere ike imeghe ya na aka ya na aka mbadamba ya. O zuru oke maka mkpa gị niile kwa ụbọchị; otu akpa n’akpa na akpa n’akụkụ abụọ maka nnweta dị mfe; otu zoro azụ zipa n'akpa uwe zuru okè n'ihi na gị dị oké ọnụ ahịa. A azu paaki pụrụ inyere gị aka tufuo-egwu ala gburugburu na akpa. A ga-ahazi ngwa ọ bụla.
Akpa a bụ ezigbo onyinye maka ụmụ akwụkwọ, ụmụ agbọghọ, ndị na-eto eto, ndị toro eto, nke toro eto eto kọleji .Mmadụ isonye na TIGERNU.
Multi-nzube azu paaki: E nwere otutu nchekwa compartments gụnyere otu iPad biini na otu iche iche padded laptọọpụ ogige na iko nkwusioru imewe. Zuru oke maka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ kwa ụbọchị na azụmaahịa, ụlọ akwụkwọ, kọleji na njem.
Ebughibu Design & Super Ọhazi: Azu paaki nwere nha abụọ, otu nha bụ 28 * 14 * 41cm (L * W * H), dabara maka laptọọpụ ruo 14 ″; nke ọzọ dị na 33 * 20 * 49cm (L * W * H), dabara maka laptọọpụ ruo 17 ″. Obere uzo dị larịị kwekọrịtara na iji azụmaahịa na-eme ihe zuru oke.Otu laptọọpụ dị iche iche n'okpuru eriri ubu na-enye gị nchekwa na nzuzo. Otu ogige dị mkpa zuru oke maka mkpa gị kwa ụbọchị; otu akpa n’akpa na akpa n’akụkụ abụọ maka nnweta dị mfe; otu zoro azụ zipa n'akpa uwe zuru okè n'ihi na gị dị oké ọnụ ahịa. A azu paaki pụrụ inyere gị aka tufuo-egwu ala gburugburu na akpa. A ga-ahazi ngwa ọ bụla.
TIGERNU multi ọtọ ejiji imewe azu paaki
Ike: Akpa akpa nwere nha abụọ dị, otu nha bụ 28 * 14 * 41cm (L * W * H), dabara maka laptọọpụ ruo 14 ″ na nha nke ọzọ bụ 31 * 15 * 46cm (L * W * H), Ihe kwesịrị ekwesị maka laptọọpụ ruo 15.6inch.Tinye akpa a haziri nke ọma bụ nhọrọ zuru oke maka iji ihe ị na-eme kwa ụbọchị na ebumnuche njem. otu oghere dị n’ihu maka akwụkwọ, faịlụ na ihe ndị ọzọ; abụọ n'ihu zippered obere akpa, abụọ n'akụkụ zippered pouches na otu zoro azụ n'akpa uwe ọma maka gị bara uru nwere. Ọ dịkwa ohere maka mkpa gị kwa ụbọchị, akwụkwọ, uwe, ụlọ akụ ike, ekweisi na ihe ndị ọzọ.
Safety atụmatụ: The ejiji azu paaki ka nke splashproof & ọkọ na-eguzogide ọgwụ naịlọn, inogide, ogologo na-adịgide adịgide na eco-enyi na enyi. Ugboro abụọ nke anọ na-eme ka mkpọchi mkpọchi mkpọchi na-enye nchebe ọzọ maka njem gị na ndụ kwa ụbọchị.
Akpa azụ a bụ akpa eji arụ ọtụtụ ọrụ, dabara maka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị, ụmụ akwụkwọ maka ebumnuche ọ bụla. AKWNKWỌ AKWNKWỌ TIGERNU dị mma maka ụlọ akwụkwọ, mahadum, ngwụsị izu, njem oge ụfọdụ, mgbatị ahụ, ọrụ kwa ụbọchị, azụmahịa, njem, ịma ụlọikwuu na njem.
TIGERNU vinteji style ụmụ akwụkwọ laptọọpụ azu paaki
Styledị akpụkpọ anụ TIGERNU nke a na-eji agbapụta mkpụrụ na-ewepụta nchebe ngwaọrụ bara uru yana akpa akpa ọrụ
• Ngwongwo nịịl dị elu, ezigbo mma, splashproof, mgbochi ịkwa akwa na eco-friendly.
• Site na okpokoro dị ọcha, mkpọ a na-egosipụta uwe laptọọpụ padded na aka mbadamba nkume iji chebe laptọọpụ gị na ngwaọrụ ndị ọzọ site na ụbọ kwa ụbọchị.
• Ihe mkpuchi ubu ya kwudosiri ike na-ebufe ubu ya.
• Ọrụ ịhịa aka n'ahụ nke ọma na ahụike dị mma nwere ike ime ka ịdị arọ dị nha, ikuku ikuku na-ebelata nrụgide na nkasi obi iji eyi.
• Nha ya bụ 30 * 15 * 47cm (L * W * H) ọ bụ ihe zuru oke maka ngwongwo gị kwa ụbọchị ma debe akpa gị nke ọma.
• A na-eji Zippers eji eme ihe nke ọma ma hazie ya na akara TIGERNU, mgbawa mgbawa na ire ụtọ iji. Isi mkpọchi bụ TIGERNU patented abụọ oyi akwa mkpọchi mkpọchi, na-enye ọnọdụ nchekwa maka njem gị.
Emere akpa a maka ọtụtụ nzube. Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị, nwa akwụkwọ maka ọrụ, njem, ụlọ akwụkwọ, njem, ịma ụlọikwuu, picnic, ịzụ ahịa, izu ụka izu ụka.
<< <Gara aga 123456 Osote> >> Peeji 2/9